[Ankapobeny ] 17 Martsa, 2009 10:12
Voaroba ny fiara mpanatitra vola ao @ Banky Foibe
Azo lazaina fa asan-jiolahy ihany ity zavatra ataon'ny miaramila ny Capsat ity satria dia norobaina avokoa ireo fiara mpanatitra vola ao @ banky foibe io maraina io. Miaramila mpioko miambina ny lapa eo no maka ny vola an-keriny.
Dia mbola hojereina fotsiny ve izao sa dia efa izay indray ny lalana mipetraka oe didin'ny besandry no mihatra. Miaramila manao fanamina mandroba tena mivadika ny glaoby eto madagasikara. Ny vatatay no mibaiko ny jeneraly. NY ben'ny tanana no manongana ny prezida!!! mahamenatra na ny mitanisany tranga ary.
Notafihina ihany koa ireo rezimanta hafa tsy mitovy hevitra @ zalahy dia ny eo anivon'ny polisy FIP etsy Antanimora izay namaly bontana moa ireo ka tsy sahy nifanehatra ela t@ FIP ireo mpioko mpihetraketraka ireto. Tany @ 2 ora maraina tany ho any io no niranga. Mbola tsy maty ao ampony ny polisy tokoa ny namany nodorana velona tetsy Sonerana. Mbola tantara hitohy koa io.
Tsy misy miala ihany eny iavoloha na andro na alina dia eo ihany ireto mpiaro ny ara-dalana ireto ary voasoratra ara-tantara mihitsy moa izao fihetsika izao hoy ny namana iray ao blongana atsy ambadika atsy. Ny vahoaka no mandray ny andraikiny rehefa tsy hanao ny mpitandro ny filaminana na dia tanam-polo aza dia tsy misy miala mihitsy ry zalahy ao. Ahoana kosa moa no omena maimaim-poana ho an'ny frantsay ny tany ny tena.
Mitohy ato ihany ny REFERENDUM virtoaly. Mitarika @ isa 70% izao ny Eny!!!